Kungani izidumbu zemiyalezo etholakele zingenalutho? - DataNumen
Lapho usebenzisa DataNumen Outlook Repair futhi DataNumen Exchange Recovery, kwesinye isikhathi ungathola ukuthi izidumbu zemiyalezo etholakele azinalutho.
Kunezizathu eziningi ezizodala inkinga:
1. Ezinye izinhlelo ezilwa namagciwane zingadala inkinga. Isibonelo, sithole imibiko evela kumakhasimende yokuthi i-Eset izodala inkinga.
Isixazululo: Vele ukhubaze uhlelo lwe-anti-virus bese uzama ukutakula futhi.
2. Uma ifomethi yefayili ye-PST ekuyo ikufomethi yakudala ye-Outlook 97-2002, lapho-ke ifomethi yakudala inomkhawulo wosayizi ongu-2GB, noma nini lapho idatha etholwayo ifinyelela lo mkhawulo, umyalezo otholakele uyoba ongenalutho.
Isixazululo: Shintsha ifomethi yefomethi ye-PST iye kufomethi entsha ye-Outlook 2003-2019 esikhundleni sefomethi yakudala ye-Outlook 97-2002. Ifomethi entsha ayinayo imikhawulo kasayizi ongu-2GB ngakho-ke izoxazulula inkinga.
3. Uma umthombo wakho PST noma OST ifayela lonakele kabi futhi nemininingwane yemizimba yemilayezo ingu-lost unomphela, lapho-ke uzobona izidumbu ezingenalutho kweminye imiyalezo etholakele.
Isixazululo: Njengoba imininingwane ingu-lost unomphela, azisekho izindlela zokuphinde uzithole.
Ngifometha idrayivu yami. Ngingabe ngisakwazi ukuthola idatha yami ye-Outlook?Uyini umehluko phakathi DataNumen Outlook Repair futhi DataNumen Outlook Drive Recovery?